cigaal shiidaad | www.saaxil.tk
Sheekadii Cigaal Shiidaad iyo Colkii
Beri hore waxa jirey nin la odhan jirey Cigaal Shiidaad. Cigaal waxa uu ahaa nin fulay ah oo wax kasta ba ay cabsi geliyan. Maalintii damde ayaa raggii qabiilkiisa ahaa oo dhammi ay dagaal u kaceen gurigii ayaa uu ku hadhay oo in uu dagaalka tago waa uu ka baqay.
Maalmo ka dib, ayaa uu Cigaal maqlay in qabiilkiisii la soo jebiyey, oo colkiina ay isaga ku soo foleeyihin (soo socdaan) oo ay doonayaan islamarkan in ay dilaan. Haweeneydii uu qaybey ayaa uu ka codsaday in ay caws ku duu-duubto oo marka uu colku soo gaadho ay u sheegto in uu dhintay.
Haweeneydiisii sidii ayey yeeshay oo inta ay caws ku duuduubtay ayay dhinac fadhiisatay oo ay ku barooratay, “Cigaal Shiidaadow col hortii jabay.”
Hal cabbaar ah ka dib ayaa colkii soo gaadhay reer Cigaal, maqleenna baroortii haweeneydii Cigaal.
Colkii fushan fardo ayay ka soo degeen oo ay u soo dhowaadeen goobtii ay gabadhu fadhidey, dabadeedna waxa ay weydiiyeen waxa ku dhacay Haweeneydii.Waxaay colkii u sheegtay in ninkeedii Cigaal uu dhintay. Abbaanduulihii colka ayaa gabadhii weydiiyey goorta uu ninkeedii dhintay.
Intii ay jawaabtii soo waddey ayaa Cigaal hararkii cawska ah ee uu ku duuduubnaa madaxa kala soo baxay oo ayuu yidhi isagoo qaylinaya, “Naa shaluu dhintay dhel!.
Abaanduulihii colku waxa uu Cigaal u arkay in uu yahay nin maadenaya. Dabadeedna colkiisii ayaa uu ku amray inay faraha ka qaadaan Cigaal oo aanay dilin.
maanta halkaas hayno joogto tan iyo intaan ku kulmi doono Sheeko xariir kale Eebe baa mahadii uu sugnatay.
Waxaa soo diyaariyey, Iskuna soo dubariday
cabdi samed baashe xuseen
Comment by waxa so diyariyey abdikani osman ahmed (aburas) on July 21, 2011 2:03 AM
bari baa waxa jiray nin la odhan jiray cigal shidad o aha nin mad badan balse somalidu ay dhahdo fuley cigal haben habenada kamid ah aso guureynayo duur cidlo ah aya waxu arkay wax hortisa kamadow kadibna is yiri cawa af libax ayad gashay habenki o dhan ayu hortagna cigal waxi madoba e kahor muqday sida ayuna wagi ugu baryey marku wagi baryey aya waxu arkay waxi xaloo dhan hortagna inu aha kurtun ama geed qalalan marka ayu cigal yiri kurtnyahow ma waxan kumoday mase waxad noqotay mase waxan lo noqon doonin waxan kumoday libax waxadse noqotay kurtun waxanse lo noqon doonin guure danbe aha nin mad badan balse somalidu ay dhahdo fuley cigal haben habenada kamid ah aso guureynayo duur cidlo ah aya waxu arkay wax hortisa kamadow kadibna is yiri cawa af libax ayad gashay habenki o dhan ayu hortagna cigal waxi madoba e kahor muqday sida ayuna wagi ugu baryey marku wagi baryey aya waxu arkay waxi xaloo dhan hortagna inu aha kurtun ama geed qalalan marka ayu cigal yiri kurtnyahow ma waxan kumoday mase waxad noqotay mase waxan lo noqon doonin waxan kumoday libax waxadse noqotay kurtun waxanse lo noqon doonin guure danbe
Comment by cabdi samed baashe on October 19, 2011 11:07 PM
waa mahadsantey abdi qani osman sheekadaad soo bandhigtey
qaar kalena waa lagaa sugayaa ..
jacayl qurbo joog galay qalalaasihiisu badanaa sheeko jacayla